Maxaa ku dhici kara dal xildhibaanadiisa aysan dumar ka mid ahayn? - BBC News Somali
"Ma ahan wax caadi ah inay aad u sii xoogaysanayso dhibaatooyinka ka dhanka ah dumarka. Ma ahan wax caadi ah inaysan jirin dumar ka qayb qaadanaya sharci dajinta ama go'aan qaadashada," Ayey tiri Yasmin Bjornum oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha dumarka.
"Arrimaheenna iyo waxa aan rabno laguma matalin xubinta sharci dajinta ee ugu sarreysa dalka," Ayey tiri Bjornum.
Xildhibaan lagu weeraray magaalada Kabul
Soomaaliya: Kuraasta 11 xildhibaan oo la laalay
Lahaanshaha sawirka Chris Morgan/BBC
Dhammaan dadkan waxaa hoggaaminaya rag, waxayna badanaa go'aan ka gaaraan qofka u tartamaya kursiga xildhibaanka.
Waxa ay sheegtay inay dalka u horseedayso saamayn xun haddii aysan dumarka ugu jirin baarlamaanka,"Waxa ay ragga ku qaadatay muddo 9 sano ah inay la yimaaddan hal xeer oo quseeya dumarka" sharci xakamaynayo arrimaha xadgudubka iyo tacaddiga qoysaska ayaanan weli la meel marinin.
Balse dumarka Vanuatu ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay uga hortagi lahaayeen sinnaan la'aanta ka jirta qaybaha muhiimka ah ee dowladda.
"Saddexdii gabdhoodba mid ka mid ah waxaa loo geystaa xadgudub ka hor inta aysan gaarin 15 sano," Ayey tiri Bjornum.
"Waa inaan isku dayno sidii aan wax uga badeli lahayn xaaladda hadda jirta inaga oo ilaalinayno xuquuqda qof walba," Ayey tiri.
Lini waxa ay ku raja weyntahay inay haatanba la joogo "wakhtigii isbaddelka" 50% oo ka mid ah xildhibaanada waa inay dumar noqdaan si sharci u hiillinaya shacabka gaar ahaan dumarka loo meel mariyo.